Ebee ka Michael Kelly bi? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Michael kelly ụmụaka - mkpebi ndị bara uru
Michael kelly ụmụaka - mkpebi ndị bara uru
Ebee ka Michael Kelly bi?
Ebibi Knowmara Na mberede enwere aha ọhụrụ na azụmaahịa ngosi na nke a kwa, iji cheta otu kpakpando nke usoro ihe nkiri ọhụụ ọhụrụ PerfectCouples, nke na-amalite na NBC n'abalị a. Biko kelee Olivia Munn, onye bụ Marty Schwartz, ọ na-amalite na Oklahoma, ee, n'ezie, ee, na ịchọrọ ịpụ na California n'ihi na ị na-eme atụmatụ ihe ebe ahụ, ị ​​gwara ndị mụrụ gị ndị ga-enweta ọrụ a, nke Amaghi m, amaghi m na m nwere ya mana echere m na enwere m ike inweta ya n'ihi gi, oburu na i si n'ebe ahu puo ubochi m ghota na aghaghi m agha ugha kama ichoro na o nwere ike ibu ugha ma oburu enwetala ohere ihu ya na agba ntụ, yabụ ị na-agwa nna nna gị okwu wee chụpụ gị ee, anyị chụpụrụ ebe ahụ na agbanyeghị anụ ụbọchị abụọ ka e mesịrị, emesịa akpọ m nkịta ọhịa wee sị hey m nwere ike nweta ọrụ kwuru oh mba anyi ederela akwụkwọ oh m amaghị ihe m ga - eme ya mere m kpọrọ n'ezie ihe ọchị n'ihi na Chris Harrison bụ onye ọbịa f TheBachelor, ee, ọ bụ naanị onye m maara na ya na nwunye ya na anyị riri oke na o kwuru na ọ sịrị na ọ bụ ya kpọọ ya, kwuo sị na ị nyara ụzọ niile ebe a ka m mere nke ahụ wee sị na m chụpụrụ ụzọ niile site na oklahoma ca n m just? Ọ dịkarịa ala, na-abịa na-ekwu na hel na mgbe ahụ, m bịara na m maara na m na dị nnọọ na ha nyere m ụwa. Ha nwere obi ike, ị maara na ọtụtụ ụmụ agbọghọ ga-enwerịrị na m bụ onye ụgha nke mere obi ike na m na-esiri ike, ị maara na m na-atụ ụjọ na mgbe m nọ na Fox Sports m bụ naanị m na-abanye teepu ụbọchị niile.
Echere m, ahụrụ m hockey n'anya, ahụrụ m egwuregwu n'anya, mana ọ bụghị ihe ọchị na-egbu naanị hockey ụbọchị niile, yabụ ndị isi niile nọ n'okpukpu nke ise wee kwuo na ọ nweghị onye ga-aga ụlọ nke ise ma nke ahụ bụ naanị m otu ụbọchị dị ka otu izu emesia dị ka nke a na-agwụ ike ya mere agara m pịa bọtịnụ ahụ n'echeghị na ọ ga-emepe ma amalitere m ịgagharị na-amalite ịgụ dị ka aha - Emily o Presidentcollege Football ọ dịghị onye nọ ebe ahụ onye isi oche ọ dịghị onye nọ ebe ahụ onye isi oche kọleji football oh hello m bu Olivia achoro m teepu um m nwere ike iru n'ihu igwefoto a ma juo ndi mmadu ajuju maka gi bu onye gi ee m ga acho ihu igwefoto ma lee ihe ochi banyere ya ihe kpatara obi di m uto ka mu na gi no ebea ma obi uto ano ebe a tupu unu niile apu, nke bu udi, mana ama m na m chetara oge izizi izi gi ebe a na opera na ncha ma m noo ala e kwuru ihe bu nro gi ? Offseason nọ na opera, chi m, yabụ ị gwara ha na mgbe ahụ ọ si n'oche ya pụta wee chịa ọchị dịka Leenot si daa n'oche ya daa ọchị na mgbe m hapụrụ m mere ụbọchị nke pro bụ mere? Njem Njikọ Oge Egwuregwu maka basketball maka NBA ma mee ka m gbaa ajụjụ ọnụ igwefoto mgbe m laghachiri mgbe ahụ Oklahomathey ka m mee ihe ole na ole ebe a, nke ọma, ị na-eme ka ọ dị mfe maka ndị nọ n'ụlọ mana ị sịrị na m ga-eme nke a mgbe ọ ọ bụ oge gị ịme ajụjụ ọnụ gị na ndị na-eme egwuregwu, ee, ị ga-eme ya ụdị kpakpando na ee e, m mere ya site n'ebe dị anya, m ga-ele anya na m ga-ahụ ihe ndị mmadụ ga-ajụ ga-abụ isi otu ihe ahụ Ugboro ugboro, ị chere n'oge a n'afọ gara aga ị nọ ebe a oh gịnị ka ị chere banyere ya ị maara etu ị siri kwadebe ihe ị chere maka agbachitere ihe ị ga-ama ma nweta isi ihe ole na ole Ogwe ahụ ga-amasị m ịmeghachi ajụjụ ma amaja m na ị ghaara ụzọ gị ma ghagha ụgha ma amaghị na ị mere otu ihe ahụ na Jon Stewart na ihe ngosi ya bia na gl eich na Oliviatwo ọzọ
Onye bụ nwunye Michael Kelly?
Ndụ onwe.Kellybi na New York City. Ya na nwunye ya Karyn lụrụ na 2005, ha nwere ụmụ abụọ.
Anyị nwere ike ịmụta ihe na David ebe a n'ihi na ọ pụtaghị ime ihe eze kwesịrị ime, n'ihi na ọ pụghị soro atụmatụ ahụ wee mee ihe a kpọrọ ya ka ọ mee, n'ihi na ọ gbasaghị atụmatụ a, ihe Chukwu ajụrụ ya ma nke a bụ ihe m chọrọ ịgwa gị na oge ọ bụla anyị anaghị eme ihe Chukwu kpọrọ anyị ka anyị mee, ọ na-enye ekwensu ohere ịkpọ anyị ka anyị mee ihe ọzọ, ya mere nsogbu dị n’ebe ọtụtụ n’ime anyị nọ : Onwere otutu n’ime anyi ndi n’aghotaghi ihe bu uche Chukwu maka ndu anyi ma mezuo atumatu a, ma oburu na i meghi atụmatụ a, ekwensu ga ewetara gi atumatu nkwalite ndi ozo ma iga aga ha ma ya mere ọ bịara bụrụ ihe dị oke mkpa nye anyị n'otu n'otu, ọkachasị anyị dịka ụka, ịmata ihe ebumnobi anyị bụ, kedu atụmatụ anyị, n'ihi na ọ bụrụ na anyị emeghị atụmatụ a, anyị na-arụ ọrụ na ihe ndị ọzọ na ọtụtụ n'ime anyi nwere mkparita uka anyi na-achoghi ime na ihe ma obu ihe ndi anyi ha enwela ihe ọ bụla ị ga - eme na nke ahụ bụ n'ihi na anyị anaghị agbaso ihe Chineke kpọrọ maka anyị na ndụ anyị. Otu n’ime ihe kpatara na Jizọs akpọghị onye na-eme emume ụdị ọnwụnwa ọ bụla, n’ihi na Jizọs lere atụmatụ ahụ anya mgbe a nwara ya, bụ na ị maara ihe agaghị enyere m aka ime ka atụmatụ ahụ mezuo, n’ihi ya achọghị m ihe ọ bụla Enwere ọtụtụ nke anyị bụ ndị na-ekwe ka ihe na ndị mmadụ na ndụ anyị na-anaghị etinye aka na atụmatụ ahụ Chineke na-akpọ anyị ma ha na-ewe oge gị ma lee David n'ọgbọ agha na mgbe ọ karịrị ihe Chineke kpọrọ ya ka o mee, ọ ekwesighi ihu ọnwụnwa a ka ọ nọrọ n'èzí ma teta n'etiti abalị wee kpebie ịga ije ma mgbe ọ na-aga ibibi ya ụfọdụ ga-agwa gị na ịkekọrịta ụlọ pụrụ iche nke David, ma ọ bụrụ na ọ gara n'ime iwu, nwee ike ile anya wee hụ nwanyị mara mma ebe ahụ, mgbe ọ lere nwanyị ahụ zuru oke anya, Akwụkwọ Nsọ na-enye anyị id ee na ọ na-asa ahụ, mana ihe na-eme ebe a bụ na ọ na-ehicha onwe ya nke ya ịhụ nsọ oge, enye ama na-aga site a dị ọcha na otú ahụ n'oge sachaa ya, anya nke ruru unyi ka a na-ele ya anya; ọ bụ otú a ka Devid si yie ya. Ha nwere otu n'ime ndị a, ya mere ọ na-ekwu hey ụmụ okorobịa ma na-emechi olu achilles bụ nwata ị nwere ike imere m amara ma ị nwere ike iwetara m nwanne nwanyị a pụrụ iche na m hụrụ ihe ndị nche ahụ n'anya n'agbanyeghị na ha na-eme obere ntụ, nke ahụ abụghị 'Daisy? Ọ dị njọ Shiva ị maara nwanyị anya gị, achọrọ m ijide n'aka na ọ bụ otu onye ahụ ma ha na-anwa ijide Devid n'ụzọ ọ bụla.
Enwere m olile anya na ị na-eso m mana ha na-achọ ileba anya n'ọnọdụ ya ma ha achọghị ịkpọ ya n'ezie yabụ ha na-agba mbọ inwe olile anya na ikekwe David ga-eme mkpebi ahụ n'onwe ya ma nke a bụ nsogbu m chere na ọtụtụ n'ime anyị nwere na anyị achọghị ịkpọ Sand site na ezigbo aha ya ma anyị nwere mmasị ịpịgharị na mgbe ụfọdụ anyị na-ekwu onye a na mgbe ụfọdụ anyị anaghị ekwu ya na onye ọzọ, mana m hụrụ ihe Sista White kwuru banyere ndị a akụkọ na Ọzọkwa na Eli Hotline, ọ bụrụ na anyị akpọghị ndị mmadụ n'otu n'otu banyere mmehie ha, ha nwere ikpe ọmụma dịka ha dị ma enwere ụfọdụ n'ime anyị na Nzukọ Chukwu nke na-ahapụ ihe ka ọ na-agba n'okpuru imi gị ogologo oge. Ana m agwa gị ihe nwere ike ịbụ ihe ọhụrụ nye ụfọdụ n'ime gị asịrị a Sinroman isi 1 nwuo na-enweghị nghọta, mana nọdụ ebe ahụ ka ndị mmadụ mee okwu a niile ọ gaghị ekwu ihe ọ bụla ma mee ihe ọ bụla gbasara mmadụ wee kpọọ ha n'aha site na jesus, o nweghi ihe o bu deacon okenye, agabigala na i na agwa ndi otu m oge nile ma oburu na ihu m michael kelly ka o na arapu na akara gi aka akpo m nma, aju m ihe kpatara na adighi m anwa igabiga a uka go Ana m acho izoputa m nke oma imara na imara na i ma na i bu pastor na acho i nweta ebe m na esoghi m mana otu n’ime nnukwu nsogbu anyi kpatara na anyi achoghi ịkpọ ndi mmadu aga m enye gi ihe nile kwuo ihe kpatara na anyị enweghị mmekọrịta anyị na ọtụtụ ndị mmadụ, anyị pịa ma anyị na-ekele otu ndị ahụ oge ọ bụla anyị mere nzukọ ma kelee na anaghị m eso ya na ọ bụ ya mere anyị ji eche na echere m na ọ dị mma ikwu ihe na onye anyị na ya na-enweghị mmekọrịta, ọ bụ ya mere m ji bụrụ onye na-enweghị oke Nke a bụ na anyị dịka ụka na-ezukọta ọnụ ka o kwere mee ọtụtụ mmadụ dịka o kwere mee, na a ga-anabata ha mgbe anyị sonyere anyị, ị ga-amata na ọ bụghị naanị na anyị na-anwa ịme ọgba aghara mana anyị na-echebara ma ọ bụghị n’ịchọ ịhụ ka ha dara ka ndị ikom Devid wedara ya ala, nke ahụ bụ ama David na m ga-aga kpọta ya agaghị m akpọta ha, mana ha mere ya na ha nile? Ha na-aga wee kpọghachite ha Anyị niile maara otu esi eme nke a David na-ekpori ndụ ma ọ na-atọ ụtọ. Ekwenyesiri m ike na ọ chere na mgbe ị nwụsịrị n'oge ahụ na ọ nweghị ihe ga-eso ya, mana echere m na ụbọchị ndị a bụ ezigbo Otu oge abụghị naanị oge dị mma enwere akpa iji lezie anya maka oge gị dị mma, oge ụfọdụ akpa ahụ na-ewere ụdị nke ma ọ bụ ma eleghị anya ụfọdụ ụmụaka na-atụghị anya ya ma enwere oge ụfọdụ na-atụghị anya ya na mgbe ụfọdụ ị nwere ọrịa ụfọdụ ị nwere ugbu a maka ndị ọzọ ndu gi, ya biazie ugbua o hu na m di ime David amam na i di ka gi ma n’ezie ihe ndi ozo eji eme ncha na ara ara. Ana m agwa gị na ị gaghị ekiri TV m na-ekwu naanị ịgụ Akwụkwọ Nsọ ka David na-anwa ikpuchi ihe a, kpughee mkparị ahụ, gbuo ndị mmadụ, mee ihe ọ bụla iji kpuchie eziokwu ahụ bụ na nke a bụ nwa ya , ma enwere m nsogbu ebe a, kedu ka isi ruo ebe ị lụrụ, ụra kpebiri na ha chọrọ ịnọ ọnụ, nke anyị chọrọ ikwu maka taa na nwa anyị nwoke na-ezute nwa agbọghọ isiokwu ugbu a enwere ọtụtụ ụlọ akwụkwọ echiche na Ha nwere Enwere ndi oka mmuta furu efu ndi choputara onye ga-ata David ma obu Bat-sheba ụta. Enwere ụfọdụ ndị si n'echiche a na Bat-sheba bụ onye ọnwụnwa ime ka David guzosie ike, onye ma na n'oge a na Mon ọ bụ mgbe niile. Ọ gara ije na-enwu egwu ma wepụta onwe ya ka a hụ Devid ma mgbe ọ rere ya ọ maara na nke a ga-abụ ụlọ akwụkwọ echiche n'ụzọ ọzọ si eche echiche bụ na Devid jiri Bathsheba mee ihe n'ihi na ọ bụ eze, olee otu ọ ga-esi o si mba mba, gini ka imere? Eze kwuru na mgbe ahụ enwere ndị ọkà mmụta ndị ọzọ ga - asị ee, mana Bat-sheba nụrụ akụkọ banyere ọnọdụ ime mmụọ nke David ma ebe ọ bụla na akụkọ ahụ nwere ike ịkọwa ọnọdụ ime mmụọ ya, yabụ na anyị nwere ụfọdụ ịta Devid ụta na ụfọdụ na-ata Bat-sheba ụta.
Achọrọ m aro gị na ị bụ ma ndị ikpe ma ebe a? ihe kpatara mkparị ahụ gara n'ihu, ihe a gara n'ihu na achọrọ m ka ị gee m ntị, ọ ga-abụ ihe iru ala mana a ga-ekwuru ya n'ihi na ọ dị mkpa ka ahapụ ụfọdụ ndị ma ụfọdụ ndị ga-apụ ihe tupu ịmalite n'ime ya, ma David na Bat-sheba tinyere aka na nsogbu n'ihi na ha abụọ wepụtara onwe ha mgbe ha kwesịrị ịnọ na nwunye ha. Ihe na - eme, gee m ntị nke ọma mgbe anyị na - ewepụta onwe anyị maka ndị anyị na - anọghị na ya Ka anyị wee dị ndị anyị na-ekwesighi ịbịa, gịnị ka ọ bụ maka mmadụ niile, ọ bụ nhọrọ na echiche nke ịbụ dị maka ndị anyị na-ekwesịghị ịbịa ma bido na mbụ? Anyị lụrụ di na nwunye ị maara na n'ihi na, n'oge mkpakọrịta nwoke na nwanyị n'oge anyị, ọtụtụ n'ime anyị ga-etolite iji nọrọ ndị mmadụ n'ụzọ ndị ị na-ekwesịghị ịdị, yabụ na ọ ga-adị mfe karịa ndụ gị n'ihi na ihe karịrị otu onye ị kwesịrị inwe ka m wee mebie gị n'ụzọ anụ ahụ, a ga m emeghe gị ụbụrụ gị ka Chukwu mere gị ka gị na mmadụ nwee mmekọrịta chiri anya, ị mara na nke a bụ na-achọ ihe, nke a bụ ihe ahụ, kedu ihe ndị na-amụ akwara? Achọpụtara na mgbe mmadụ abụọ gbakọtara wee nwee ọ joyụ n'ụbụrụ gị, agaghị m abanye n'usoro aghụghọ niile. Ma na nkenke, ụbụrụ gị na-ekwu ugbu a na ọ joyụ na-esite n'aka onye ahụ, ya mere na mgbe ị na-eche banyere onye ahụ kpachapụ anya, chegharịa ọzọ ihe ụbụrụ gị na-egosi gị, ọ joyụ na-esite na onye ahụ ma ụbụrụ gị na-amata eziokwu ahụ bụ na mmadụ dị mma na njedebe mgbe onye ahụ nọ gburugburu na ihe ụfọdụ ji nwayọ na-agbada n'okpuru na ihe m masịrị n'ihi na nke ahụ bụ mbụ ahụmịhe m nwere obi ụtọ mana lelee ihe na-eme na wdg, obi ụtọ na otu na mgbe ahụ nke ahụ anaghị arụ ọrụ ma anyị na-ahụ onye ọzọ iji tinye uche gị na uche gị na Brain na-ekwu ihe dị mma, ugbu a ọ bụ mgbe m nwere obi uto na anyi nwere, ma nke ahu adighi aru isi wee jee na nke ozo ma gi enwee obi uto ha na inwe mmekorita na nmekorita nke di na ụbụrụ gi dika okay eji m ha eji m ha ugbua ka m jiri ya ebe a na ụbụrụ gị na-aga site na nke a Enwere ike ịchọpụta onye anyị kwesịrị ịnụ ụtọ, wee mee nke a n'oge ahụ anyị na-ahụ kwa ụbọchị ma nke a na-eji ụbụrụ anyị eme ihe ezighi ezi ị na-alụ di ma ugbu a ị na-agwa ụbụrụ gị naanị otu ihe ụbụrụ gị dị ka ugbu a n'ihi na afọ 1617 nke ahụmịhe m ejirila m mee ihe na-atọ ụtọ site na nke a na nke a ma ya mere ugbu a na gị na mmadụ nọ, enwere ndị ọzọ nwere ike ịme gị, ị nwere wired mana ị gbanwere onwe gị n'ihi na ị wepụtara onwe gị nye ọtụtụ ndị mmadụ onye ị kwesịrị iwepụta ma yabụ ka ị na-ewepụtakwara onwe gị ugbu a n'ụzọ ị na-agaghị arụ, nke ga-adịrị gị mfe karị ime na otu mmekọrịta gbara mbọ ị na-eso m?
Ego ole bụ Michael Kelly?
Ọ bụ kpakpando ncha, Riverdale's hot father na, n'ezie, di Kelly Ripa. Mana n’agbanyeghi na anyị ahụla ọtụtụ foto ọnya Maazị Consuelos, nwoke a nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye karịa oke oyi oyi ya.
Site na mgbọrọgwụ ya nke ọdịbendị ruo na aha ezinụlọ - nke ahụ bụ eziokwu banyere Mark Consuelos. A mụrụ Mark na Spain na 1971 na nna ya Mexico na nne Italiantali. Ezinụlọ ahụ mechara nọrọ Italytali tupu ha akwaga United States, ebe ha bi na Illinois na Florida. 'Onye a bụ di m m hụrụ n'anya.' Onye omee ahụ anaghị asụ Spanish, mana ọ na-asụ ndị Itali.
Mana n'ịtụle nzụlite ya, ọ na-ekwu na ọ gbasoro njirimara ya dị ka nwata. Na 2018, ọ gwara Teen Vogue, “Abụ m ọkara Mexico, ọkara Italian. N'ihi ya, m na-anọ na Nieland a ebe m na-anọghị 'Mexico' zuru oke; Adịghị m ezughị Italiantali.
Ọ bụ mgbe m tolitere ka ọ na-ejide m. Oriakụ Kelly keere obere foto Mark na nna ya gbanwere na Instagram na 2020 wee dee, sị: 'Papa agaghị ada n'akụkụ osisi ahụ. 'Mark nwere ike ịbụ onye ama ama na ụlọ ọrụ ntụrụndụ n'oge a, mana ọ gaara esi n'ụzọ dị iche.
Consuelos kwetara na magazin ndị mmadụ na 2016 na mbụ ọ chọrọ ịbụ ọkà mmụta gbasara ihu igwe. Mana ọ dị ka Mak nwere ụzọ ọzọ n'uche nke na-enweghị ihe ọ bụla gbasara ime ihe ma ọ bụ ihu igwe. Mgbe ọ debanyere aha na Notre Dame ma kwaga Mahadum South Florida, ọ gụsịrị akwụkwọ na Marketing. Mgbe ahụ achọpụtara m na eleghị anya achọghị m iyi kootu n'oge ndụ m niile. ' ihe odide niile m na-egwu ugbu a na-eyi uwe. 'Mana ka ọ dị ka ọ na-eweta nkà azụmaahịa ya na Hollywood, ọ dị oge ọ rụrụ ọrụ ndị ọzọ n' ụdị ọkwa dị iche.
Kelly gwara Vanity Fair, 'Ọtụtụ ụmụ okorobịa na Hollywood nwere nke a. Ọ mara mma na South Florida ma chọọ ịbanye na azụmahịa azụmahịa. Yabụ ọ malitere dị ka roadie na otu ụmụ okorobịa ndị a wee gwa ya okwu na warara.
N'ịbụ onye nwere aha a na-agaghị echefu echefu Meaty Mark, Consuelos rụrụ ọrụ n'otu ụlọ oriri na nkwari abalị a na-akpọ Stinger na Tampa. Dị ka ọ kọwara Onye Nkwupụta ahụ: 'N'oge ahụ, abụ m nwata, nzuzu na ego ahụ dị m ezigbo mkpa. '' Mark, Mark, obere ihe ụtọ ahụ. '' Ọ dị mma. 'Daysbọchị ndị a Mark na-ekwu na ọ ka na-arụ ọrụ maka nwunye ya mana jiri Vanity Fair kparịa:' Ọ naghị atụ m maka ya. '' Abụ m nwa agbọghọ kacha nwee obi ụtọ na America.
Enwere m olile anya na umu agbogho nile ndi mere m ihe n ’ulo akwukwo sekọndrị n’ele ihe a ugbua. ”Akụkọ banyere Mark na Kelly nwere ike ịbụ ihe nkiri hallmark. Ha abụọ zutere na set nke All My Children na 1995 mgbe a tụbara ya na ihuenyo dị ka mmasị ịhụnanya ha.
O mechara kọwaara E! News: “Mmetụta mbụ m nwere banyere nwunye m bụ - o doro anya na ọ mara mma nke ukwuu - mana ọ bụ onye ọchị, nwee ọgụgụ isi ma dịkwa ngwa ngwa. Aghọtara m na ọ bụrụ na mụ na ya esee okwu, m ga-atụfu ya. 'Anyị bụ ndị enyi ruo ogologo oge, m na-ekwu, karịchaa' 'Ee' 'Tupu anyị agafee ahịrị ahụ.
Anyị bụ ndị enyi ma ọ dịkarịa ala otu izu tupu ihe emee. Di na nwunye ahụ malitere mmekọrịta ịhụnanya na ihe megharịrị ngwa ngwa. Mark kọrọ otú o si jụọ ajụjụ ahụ, ya na Kelly na Live chetara, “Anyị gara mkpagharị n'ogige ahụ.
M kwenyesiri ike ka ọ laghachi n'ụlọ m. Anyị nwere Pizza na mmanya ma gwa ya ka ọ lụọ m. Ka anyị jee Vegas echi lụọ di na nwunye. ”Ha abụọ lụrụ n’ụlọ akụkọ ifo nke Chapel of the Bells na Vegas n’afọ 1996 - otu afọ ha zutere - ma nwee ọ happụ kemgbe ahụ.
Mark nwere ụmụ atọ na Kelly. A mụrụ Michael ha mbụ na 1997 naanị otu afọ mgbe kpakpando ahụ fụrụ, ebe a mụrụ nwa ha nwanyị bụ Lola na 2001 na nwa ha nwoke nke ọdụ Joaquin mụrụ na 2003 Baby. Kedu ihe na-atọ ụtọ na ya? Enwere m elekere ndị okenye. ”“ Obi dị anyị ezigbo ụtọ. ”“ Mba, mba. ”Ndị Fans Riverdale nwere ike ịmata Michael site n’oge ya na-egwu ụdị nke nna ya nke obere na ngosi na 2018.
Mark dere na Instagram: “Ana m ekele nwa m nwoke Michael na a tụpụrụ ya dị ka nwata Hiram. Anyị dị mpako. A hụrụ m gị n'anya. ”N’ebe nwa nwanyị Lola nọ, nna ya kwenyere na magazin ndị mmadụ:“ Dịka m chere na m ga - abụ ihe mgbochi karịa ka m chere na m ga - abụ mgbe a mụrụ ya ma jide ya n’aka m, m wee dị nro ntakịrị.
N'ihi na m maara n'ezie ihe ezigbo isi o nwere n'ubu ya. N’ikpeazụ, a bịa n’ihe banyere Joaquin, Consuelos kwuru, sị, “will ga-enwe mkparịta ụka na Joaquin ebe ị ga-achọpụta na ị ka mụtara ihe ọhụụ banyere ụzọ ahụ, ọ na-eche. 'Mara na ịmara ụmụ ya nke ọma nwere ike ịbụ n'ihi na ọ na-eme ka oge ezinụlọ bụrụ ihe kacha mkpa.
Kelly kpughere ABC News: 'Di m riri nri abalị kwa abalị dị ka ezinụlọ na-etolite ma kwuo, sị,' Anyị na ezinụlọ na-eri nri kwa abalị n'agbanyeghị agbanyeghị. 'Anyị na-emekwa. Ọ pụtara ihe dị ukwuu nye ụmụaka, ọ pụtara ọtụtụ ihe nye m. ”Ọ bụ ezie na Mark amatabeghị ihe ọmụmụ okpukpe ma ọ bụ kwusa ozi ọma na chọọchị ọ bụla, dị ka nwunye ya, Kelly si kwuo, e chiri ya echichi ịbụ pastọ na ịntanetị.
Na 2008, a kọọrọ na Mark na-eje ozi dị ka onye ọrụ gọọmentị maka agbamakwụkwọ Howard na Bet Stern. N'ezie, arịrịọ di na nwunye ahụ mere ka e chie Mark ahọpụta. N'ikwu okwu banyere ọrụ di ya n'oge oge pụrụ iche, Ripa kwuru na ọ bụ, kwuo, 'ụjọ na-atụ' wee gbakwunye, 'Ọ lere anya, amaja m kwuo, dị ka onye ọrụ gọọmentị, ọ mere n'ezie.' Emume a na ụlọ oriri na ọ Leụ Leụ Le Cirque na New York City na-enwu na ọtụtụ ndị ọbịa a ma ama gụnyere Joan Rivers, Barbara Walters, Jimmy Kimmel, Sarah Silverman na Billy Joel. “Ọ dị njikere ịlụ mmadụ, onye ọ bụla chọrọ ịlụ?” “Ee, ọ bụ, onye ọ bụla n'ime unu n'ezie.” Enwere ike mara Mark maka ọrụ ya, mana na 2007 ọ kwadoro NBC bachelor-like mkpakọrịta nwoke na nwanyị gosiri Age nke Lovehụnanya.
Ndị na-ekiri ihe nkiri na-ele anya ka nwoke 30 dị afọ iri na ụma nke Australian bụ Mark Philippoussis gbara gburugburu ụmụ nwanyị 13 dị n'agbata afọ 21 na 48. Onye isi ọrụ na-egosi ihe nkiri ahụ kọwara banyere Reality TV World ', na-anwa ịza ajụjụ dị mfe nke ịhụnanya, ọ dị afọ ? 'Onye mmeri nke asatọ bụ Amanda Salinas, onye na-enye obi ụtọ si Tennessee. Mana ọ bụ ezie na usoro ahụ ahụghị oge nke abụọ, Mark emeghị TV nke bụ eziokwu.
N'afọ ahụ, ọ duziri ihe ngosi nke abụọ maka NBC akpọrọ Science of Love. Oge a ka emere ihe n’otu oge elekere pụrụ iche. 'Sayensị kwenyere na ha nwere ike ịrụ ọrụ ka mma karịa ya n'ịhụnanya. 'Dabere na Reality TV World, ihe ngosi a bụ' iji gosi ma otu ndị ọkachamara mmekọrịta na-eji kọmputa nwere ike ịmepụta egwuregwu na-aga nke ọma karịa kemịkal sitere n'okike. 'Na-enweghị nke ọ bụla na-egosi ndị na-ege ntị na-eguzosi ike n'ihe, Fans nwere ike ịrapara na Bachelor kama.
Ọ na - apụta na Mark abụghị naanị nwere anwansi ya n'ihu igwefoto - ọ na - adọpụkwa ụfọdụ aghụghọ na aka uwe ya n'azụ Mpaghara. Na 2007, kpakpando hiwere ụlọ ọrụ mmepụta Milojo ya na nwunye ya Kelly. Dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo, 'aha ya bụ akwụkwọ ozi abụọ mbụ nke ụmụ Mark atọ na Kelly dere: Michael, Lola na Joaquin'.
Dị ka akwụkwọ akụkọ Oprah si kwuo, Milojo emeela akwụkwọ akụkọ ndị a ma ama, gụnyere ESPN's The Streak, nke nwetara nhoputa Emmy, na Onye Nlekọta emlọ - ihe ngosi TV nke 2010 nke Ripa kwadoro mana o doro anya na ndị na-ege ntị adịghị adọrọ mmasị. Mama m ga-agbalị ire nnukwu echiche a. ” Mgbe m lọtara, ndụ anyị nwere ike ịdị iche. 'Yana otutu oru ndi ozo - tinyere American Cheerleader, Ncha Dirty, Ihe oriri m ka mma karịa nke gị na ndị isi nnabata - Oge ngwụcha akụkọ kwuru na August 2020 na Gothic Mexico ga - emepụta dabere na akwụkwọ akụkọ Silvia Moreno -Garcia. Mark nwere O doro anya na nnukwu ihe ịga nke ọma na ọrụ ya, mana tinyekwara nnukwu mkpa na ịkwado ọtụtụ ihe dị mkpa.
Na mgbakwunye na itinye aka na ịkwalite mmata nke ọrịa shuga, kpakpando ahụ kwadoro na Los Angeles LGBT Center nke 49th Anniversary Gala Vanguard Awards na 2018. Na July 2020, ọ gara Instagram ka ọ biputere n'aha nzukọ Free The Families: 'mustmụaka ga weputara na ulo mkporo ICE ebe ha na ndi ezinulo ha no na nsogbu onodu ojoo. Mana Mark gafere mgbasa ozi mgbasa ozi dị mfe ma jiri obi ya jiri aha ya na akụnụba ya rụọ ọrụ ebere.
Na Ọgọstụ 2020 KELE! Canada chọpụtara na Mark na Kelly nyere onyinye $ 1.5 na otu ọrụ ebere na-enye ụmụaka na-enweghị ebe obibi akwụkwọ n'oge oria ojoo coronavirus.
Consuelos gwara ndị mmadụ na ọnwa ahụ maka ịkwado Women In Need, otu nzukọ na-enye ọrụ na ebe obibi maka ụmụ nwanyị na ụmụaka nọ na New York City nọ na mkpa, ndị na-ekwu maka ire ere, 'Anyị maara etu anyị si nwee obi ụtọ - na anyị ga-eme niile nọkọtara ọnụ otu a agaghị eme ọzọ. Ọ bụ oge jọgburu onwe ya maka ọtụtụ mmadụ. 'Nye anyị ọ bụ ihe ùgwù ịnwe akụkụ' Nye anyị ọ bụ ụdị ihe ùgwù. 'Ọ bụ ezie na ha doro anya na ha na-emesapụ aka na ego ha, Mark na Kelly nwekwara ọtụtụ ihe estatelọ ala, onwe ya.
Dabere na Celebrity Net Worth, ha mefuru $ 9 nde na ụlọ 6,700 square-ụkwụ na New York City na 2005 wee ree ya maka uru nke $ 3 nde. Na Mee 2014, Consuelos na Ripa nwetara ụlọ ọzọ maka $ 24.5 nde. 'Undsda dị ka abụọ ndị a nọ na-atụgharị Manhattan ezigbo ala na ụlọ n'ime! O yiri ka ihe onwunwe nke ikpeazụ bụ ụlọ elu Soho nke ha zụtara maka $ 9.5 na 2005, dị ka Curbed New York si kwuo.
Kpakpando emezigharị ụlọ ahụ, nke na-enye ọtụtụ ebe ntụrụndụ yana ime ụlọ mgbatị ahụ nwere nnukwu ọnụ ụlọ, ebe a na-asa ahụ na ebe a na-asa ahụ. Iji bulie ya elu, enwekwara nnukwu ụlọ elu nke nwere ebe ọkụ dị mma na nnukwu ụlọ nnabata nwere ọtụtụ ebe nchekwa, ịsa ahụ uzuoku na n'ezie ikuku. Ha mechara rere ihe onwunwe ha maka nde $ 20 dị jụụ, dị ka Realtor.com si kwuo.
Mana ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịdị ka ebe obibi kachasị nrọ, ezinụlọ tụlere ụlọ obibi $ 30 nde ha na New York City bụ ebe obibi ha bụ isi. Dabere na HI, ihe dị egwu dị na Manhattan's Upper East Side, ebe ezinụlọ na-enwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 8,000 square ụkwụ nke oghere gụnyere ime ụlọ ise na ime ụlọ ịwụ isii. Ma nke ahụ abụghị ihe niile.
Ubon Consuelos chọrọ ebe ị ga-agbanahụ ọgba aghara obodo ahụ. Celebrity Net Worth na-ekwu na ha nwekwara ụlọ na Telluride, Colorado, yana nnukwu ụlọ na Hamptons. Ha zụtara ụlọ ha na Southampton na 2004 maka $ 2.35, mana ọ nwere ike ruru nde $ 10 na $ 15 nde ugbu a.
A na-eme atụmatụ atụmatụ ya ihe ruru nde $ 45 na mkpokọta. 'Ọ dị mma, ya mere, ihe ndị a na-etu ọnụ maka oge fọdụrụnụ.' Mark na Kelly na-eme nke ọma n’enweghị ajụjụ.
Ekele maka ọrụ opera Mark, ọdịdị ya na Riverdale, na ngosipụta ya na ọtụtụ ihe ngosi ndị ọzọ - ọ bụghị ịkpọtụrụ ndị ọzọ na-eme ego ya dị ka ụlọ ọrụ na-emepụta ya - Celebrity Net Worth kwuru na ụgbụ kpakpando ahụ ruru atụmatụ $ 40. “Nna nke ụmụ m na di m m hụrụ n’anya nke ụmụ mmadụ iri abụọ na abụọ juru m anya mgbe m gara Bahamas. 'Ma ọ bụ ezie na ego ego Mark nwere ike iyi ihe dị oke mma, isi okwu ire ya chọpụtara na ọ bụ n'ụzọ dị ukwuu n'ihi ego nwunye ya na-akpata.
Ọ bụrụ na i lee anya n’ụba Kelly, ị ga-ahụ na o nwere onye ruru nde $ 120 na ụgwọ ọnwa kwa afọ ihe dịka $ 22. Ya mere, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ego ya ga-enyere aka ịkwawanye ego ego di ya. Ma eleghị anya, ị na-eche ugbu a na ị ga-enwe ike ịtụfu ego gị ebe ọ bụ na di na nwunye nwere ike ịba ọgaranya.
Ha nwere ike. Mana o yiri ka ha were nnukwu ego ahụ tụfuo ya maka mmefu na-enweghị isi - opekata mpe ma ọ bụrụ na otu n'ime ụmụ ha akwụ ụgwọ ahụ. Mgbe nwa ya nwanyị Lola debara aha na Mahadum New York na 2019, o doro anya na ọ masịghị nri dị na menu kọleji ya.
Kama, o nyere iwu site na ụlọ nri site na Postmates. Naanị ọnwa ole na ole ka e mesịrị, na Jenụwarị 2020, Kelly gwara anyị kwa izu, 'Nke a bụ ihe ga-eme. Ọ ga-enye salad ahụ maka $ 7, mana ọ ga-efu $ 25 iji nyefee ya ụlọ atọ na New York City. 'O kwetara na ọ maghị ọbụna na Lola na-eji kaadị debit maka ebumnuche a, na Kelly kwụsịrị ịkwụsị mmefu okomoko, na-agbakwunye,' Oh, anyị mechiri akaụntụ kaadị debit ya. '' Nke ahụ ọ dị mma? '' Ee.
Ị mere nke ọma. Akwa ise. '' Nke ise.
Fọrọ nke nta ka ọ ghara. Lelee otu n'ime akụkọ kachasị ọhụrụ anyị ebe a! Na ihe ndị ọzọ Nicki Swift banyere kpakpando kachasị amasị gị ga-eso n'oge na-adịghị anya. Denye aha na chanel YouTube anyị ma pịa mgbịrịgba ka ị ghara ịhapụ otu.
Michael Kelly nọ na-aga ije nwụrụ anwụ?
Michael KellyNetWorth:Michael Kellybụ ihe American omee onye nwere ụgbụkwesịrịnke $ 3.
Ọbịa na TV kacha ewu ewu USB ejije anụ ọhịa zombie zutere ndị nwụrụ anwụ na-aga ije onye ọ bụla biko nabata Steven Yeunsee ebe ị nwere ike ịgwa m ihe ọ dị ka ọ bụrụ akụkụ nke mmetụta a n'ihi na ndị agbụrụ gị dị nzuzu dị ka ndị na-aga ije Nwụrụ Anwụ Fans, ee, m na-ekwu ee ọ bụ anụ ọhịa kwa ụbọchị, m na-eche na ọ na-atụ m ụra ma mgbe ụfọdụ m ga-enwe dịka ọ dị afọ anọ ugbu a mana m ka ga-eteta ma chee echiche chi m ihe na-eme na ndụ m ya mere ọ dị mma ma ọ bụghị ụzọ ọrụ a ka nne na nna nwere gị, gịnị ka ha chọrọ ka ị ghara mba, ha? chọrọ ka m bụrụ dọkịta, dị nnọọ clichéd ee ha nwere obi ụtọ na ebe ị nọ, yabụ ihe dị mma bụ na ị maara na ha mara mma, ha kwadoro nke ọma n'ihi na ha anaghị eme ihe m chọrọ ka ha mee mana m mebiri ha. site n'oge m dị afọ ise Enwetụbeghị m mmasị ige ha ntị n'ezie ewepụrụ m ha ọtụtụ afọ iji nweta trajectory ahụ. Ọ dị mma mana ha dị oke mma ma ha chụrụ aja nke ukwuu nke mere na ọ dị mma ma ọ bụ eziokwu na mama gị chọrọ n'ezie nwa agbọghọ, ee e, ee e, ee, anyị na-anwa ime ka ị bee akwa, ị maara ee, ọ bụ ihe dị egwu, uh, mama m mara mma nke ukwuu, mana ọ bụ ụlọ nwoke juputara na testosterone ma anyị adighi umengwụ? Gumụ okorobịa, ee, ọ bụrụ na o kwuru ya dị ka ụmụ nwoke, um, mana ọ ga-eme ka m hie ụra n'ihe dịka elekere 10 nke abalị, dịka elekere itoolu mgbe m dị afọ asatọ ma ọ bụ itoolu, ọ ga-adọpụ ntutu m niile, naanị ịhụ ihe m ga - adị ka ọ dị ya ọ ga - ele m anya wee pụọ ma n'oge ahụ amaghị m ihe na - eme kama ọ na - ekwu okwu karịa ma ọ bụ obere karịa na ị ga - ama onwe gị ma ọ bụrụ na ị bụ Nwatakịrị nwanyị nke ga - abụ nnukwu ụmụ nwanyị atọ ma m ga - ahụ nwa nwoke n'anya mana ahụrụ m n'anya echeghị m na m ga - eme nke ahụ - gịnị ka m maara mishima, ọ bụghị ma ọ bụ ihe ọ bụla mana ọ dị ka ha na onye nwere mmekọrịta ọkwa ahụ na aka nri ga-enwe ma nwee olile anya na m nwere ike inye ya nwa nwa n'oge ụfọdụ ịmechara nke ị chere na ị bụ nnukwu onye na-agba ọsọ ugbu a tupu ị nweta ihe ngosi ahụ dị egwu, n'ụzọ dị ịtụnanya, site na mahadum dị na Michigan na 100 ruo Chicago wetara, bev ma ọ bụ m kwuru Michigan yabụ amaghị ma ọ bụrụ na ha dị ka kọleji mana m kwagara Chicago na enyi m Andy O tinye m na egwuregwu ahụ. echetakwa m ịgụ ya na mgbe afọ ise gachara mgbe m gara nyocha, dị ka chi ohmic, nke a bụ ihe ọchị m gụrụ, ọ bụ naanị ihe egwu na-egwu agwa a, ọ ga-emecha mechaa? Ee ekele m nwere mmetụta na mama gị hapụrụ gị, enwere asịrị na ị kwenyere na mmụọ ma na ị nwere nnukwu akụkọ mmụọ n'ihi na echere m na echere m na m bụ onye kwere ekwe, ọ dị mma ee, a nụla m ihe ụfọdụ gbasara nọọsụ anyị toro elu m kwuru na m nọ n'ezinụlọ ndị Korea ma ndị Korea n'ozuzu ha.
Knowmara na enwere ihe omimi na omenaala ị maara mana ọ jụrụ nkwenkwe ụgha na maka m dịka m tolitere ka m na-anụ maka ya dị ka ndị mmụọ ọjọọ? dị ka ị maara, dị ka ndị mmụọ ọjọọ na-egwuri egwu dịka nwatakịrị, mana mgbe ahụ ịmara na m gara mahadum ozugbo m nọ mahadum na ọ dịghị, ọ dị mma na m nọ kọleji na m na-amụ akwụkwọ maka etiti m wee dị ka Altas mụtara na m bụ dị ka elekere 4:00 nke ụtụtụ, m na-ele akwụkwọ m anya wee hụ otu ntapụ ọbara na-atasị na imi n'ihi na m mụtara nke ọma na ọ dara ngwụrọ wee kpochapụ ya, echere m na m ga-ehi ụra na ahụ m kama nke ịrahụ ụra ụra m dara n'ụra ụra mkpọnwụ wee nwee ike ghara ịkwaga ma mgbe ahụ enwere m mmetụta dị ka nrụgide na obi m wee meghee anya m wee lee anya ma hụ nwanyị a ihu ya na-ele m anya n'ihu na mgbe ahuru m freaked, alaghachighm hie anya m kwesiri iju ajuju banyere ihe nile m gwara gi, o na agbakorita elu na Okay I think be, i was in a knowledge high, that's we we ga-ezumike, aga m agbake na zombie apocalypse yabụ nọrọ ebe ahụ ar site The Walking Deadand enwere m obere ajụjụ nzuzu mana ọ dị m mkpa ịmara apụtaghị na michael nwere ike ịlanarị Zombie Apocalypse Ee anyị nwere ike ịsị, ọ bụrụ na Michael Strahan enweghị ike ịlanarị zombie apocalypse, anyị niile nọ na nsogbu, ị maara? ụmụ nwoke na-egwu mmiri, pụọ n'azụ m ga-ekwu na m na-ekwu, ọbụlagodi na ị nweghị mmasị na nka, ọ dị m ka ị nwere amara na ịma mma - oh, ị nwere ike ịrapara n'òtù siri ike, ee, atọ kwụ ọtọ, nke ahụ nwoke na nti gị bụ ịhụnanya gị na Maggie ee na ihe ọ bụ ụdị nke ogologo-legged na Akon ị na-amasị Maggie ụtọ yeah yeahyeah na ya mere na ị na-n'ụzọ ụfọdụ hụghachiri na m na-ejikarị chọrọ ịmata ma ọ bụrụ na ị bụghị n'ezie na ị nweghị ahuru onye obula ikwuru na imara ihe mere n’agbanyeghi na i nweghi nwa oh my god i putara na onodighi nma diri umu aka na nke a bu ihe gi n’acho mgbe nile n’ihu i nyere onye si n’ala takebaby Zombie this company we ’ Anọ m n'ihe ndina na nkeji oge niile anyị ga-ahụ ihe na - eme, ọ pụtara na anaghị m akwado ya n'onwe m Steven ma ị maghị mmetụta Glenn nwere n'ihi na ya na Maggie ka ọ bụrụ ya mere d oge a ga - eme na ngwụcha izu a ma ama m na ị nwere ike agwaghị anyị ọtụtụ ihe gbasara ya, mana gwa anyị ntakịrị ihe m ga - enweta ọzọ ee bụ isi m chere o bụ nke isiokwu a n'oge a na-ahụ etu ụmụ mmadụ si dị anya na ụmụ mmadụ, nke pụtara na nke a bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Ana m agbalị ịbụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ekwu uh-huh, enwere m ike idebe ọrụ m na Harry na-edebe ya, mana mee ya n'onwe gị ọ dị m ka m na-agwa gị ihe ọ bụla ka anyị wee nwalee ndị mmadụ obi ike na lee ihe ha kwuru bụ, um, yabụ anyị ga-ahụ ihe na-eme, ọ dị mma ee ee abụghị nke kpụ ọkụ n'ọnụ n'agbanyeghị na enwetara m ya, ọ masịrị m oge ahụ Oh lee ya anya lee lee ihe omume kachasị amasị gị n'ịhụnanya webụsaịtị site n'ịhụ Kelly na Michael Calm dị ndụ
Ndi Michael Kelly Guitars di nma?
Na mkpokọta,Michael Kelly Gitaeme ka ụfọdụ oké mma ngwá ndị siri ike iti mgbe tụnyere ndị ọzọguitarna a yiri price mgbodo. Ha di oke egwu n’ile osisi na osisi puru iche na uda di egwu.05.27.2021
Michael Kelly Basses ọ dị mma?
A bass si Fender si kpochapụwo blueprints na retailing nke ọma n'okpuru a akwa. Dị na otutu jụụ risịrị. A na-ahụta Jackson mgbe niile ka ọ bụrụ akara igwe mana mbinye aka ọhụrụ Ellefsonbassbụ ihe akaebe dị mma na ọ nwere ike ịme ka ọ dị elubassmaka ndị egwuregwu ụdị niile. Ndị a bụ ndị pụrụ iche.20.08.2020
Kedu ihe netwọ Robin Wright bara?
Ego ole bụRobin Wright Worth?Robin Wright net uruna ụgwọ:Robin Wrightbụ ihe American omee onye nwere anet urunke $ 65 nde dollar.
Kelly bụ nwa agbọghọ TWD?
Ndị nwụrụ anwụ na-aga ijeihe nkiri trailer 6-9
Enwere m ọchịchọ ịmata ihe ma chọọ ịchọpụta iheKellyyiri ya ma ju ya anya na obu nwoke. ''Kellydị ogologo, nkwọcha, ma wuo - ngụkọta nke m. Achọpụtara m na ọ na-atọ ọchị ma na-enye ike na AMC ga-ekwe ka ọrụ nwoke weghara yanwanyi. Nov.
Connie TWD anwụọla?
Dọ aka na ntị: Enwere ndị isi na-ebibi ihe maka 'Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije'oge 10 n'ikpeazụ,' Akwa Mbibi. ' Oge ngwụcha ụbọchị Sọnde mechara kpughee ihe mereConnie(Lauren Ridloff) mgbe ọ furu efu n'oge ọgba-na mbido oge ahụ. Na ihe omume ikpeazụ oge,Connieekpughere na odi ndu.Ọkt 5 2020
Onye na-egwu Rick Kelly Guitars?
.B.Kelly guitarjikọtara otu nwoke dị afọ 69. Ná nkezi, ọ na-eme otu n'ime izu. Ejirila ngwa egwu ya maEgwurunke Bob Dylan, Patti Smith na Lou Reed nwụrụ.Ọkt 5 2019
Onye bụ onye na-eme ihe nkiri Michael Kelly lụrụ?
Michael Kelly. Na 22-5-1969 Michael Kelly (aha otutu: Michael) a mụrụ na Philadelphia, Pennsylvania, United States. O meela nde dollar 3 ya Broken English, Tenderness, Chronicle. Onye na-eme ihe nkiri lụrụ di na nwunye Karyn Mendel, akara ngosi ya bụ Gemini ma ọ dị afọ 50 ugbu a.
Kedu mgbe Kelly na Michael mụrụ nwa mbụ ha?
Kelly kwuru na ọ pụtara na uwe agbamakwụkwọ $ 200. N'otu aka ahụ, mgbe otu afọ gasịrị, di na nwunye ahụ nabatara nwa mbụ ha, Michael na June 1997. N'otu aka ahụ, nwa ha nwoke ghọrọ nwanne nwoke okenye na June 2001 mgbe a mụsịrị nwanne ya, Lola Grace na June 2001. Di na nwunye ahụ nwekwara nwa nwoke aha ya, Joaquin Antonio onye a mụrụ na 24 February 2003.
Kedu aha ụmụ Kelly Ripa?
Michael bụ ndị di na nwunye Hollywood mụrụ Mark Consuelos na Kelly Ripa. Mgbe ha nabatara ọkpara ha, ha makụrụ ụmụaka abụọ ọzọ, Lola Grace na Joaquin. Nwanne nwanyị nke Michael, Lola Grace mụrụ na 16 June 2001 ebe nwanne ya nwoke nke ọdụ, Joaquin mụrụ na 2003.